Will Smith wuxuu daaha ka qaadayaa daqiiqadii uu ugu jeclaa raadinta farxadda - Dhaqanka Pop
Will Smith wuxuu daaha ka qaadayaa daqiiqadii uu ugu jeclaa raadinta farxadda
Muuqaal cusub oo la soo dhejiyay oo caan ah Kanaalka YouTube , Will Smith wuxuu daaha ka qaaday waxa uu jecel yahay qaybtii 2006dii Raad -raaca Farxadda ahaa.
Si uu halkaas u gaaro wuxuu soo gudbiyaa sheeko ku dhawaad ​​saddex daqiiqo oo hordhac ah oo ka hadleysa *sida ay u kala horreeyaan:: jaceylkiisii ​​carruurnimo ee chess, aabihiis oo ku garaacay chess afar sano ka dib, Jada wuxuu shaqaaleysiiyay saynisyahan chess ah si uu wax u baro saddex maalmood, sayidkaas chess isaga oo siinaya xeelado maskaxeed si uu kor ugu qaado ciyaartiisa, sida Mike Tyson u adeegsaday khiyaamooyin maskaxeed si uu uga takhaluso kuwa ka soo horjeedda ka hor inta uusan dagaalku bilaaban, sida dadka is-shakiga ahi ugu horseedo inay maskax ahaan hoos u dhigaan naftooda, Jaden wuxuu u sharraxayaa farqiga u dhexeeya labadooda, iyo inaad awood u leedahay inaad ka gudubto waxa aad u malaynayso in xadkaagu yahay.
shukulaatada muraayadda shukulaatada oo leh caano ciriiri ah
Waxa oo dhan ayaa laga yaabaa inay xoogaa dhiirigelin ah siiyaan kuwa u baahan galabnimada Arbacada. Intaa waxaa dheer Will Smith. Wuxuu yaqaan sida loo sheego sheeko:
Qiyaastii saddex daqiiqo gudahood ayuu tagaa Raad -raaca Farxadda qayb. Waa digniintaada in waxa hoose ay ku jiraan qaswadayaal oo kaaga jawaabi doona jees jeeska. Haddii aad tahay qof fiidyow ah fiidiyaha kore waa adiga.
Khadka dheeraadka ah halkaan si qaswadayaashu aysan toos ugu hoos gelin.
yaa ul ah oo hadda shukaansanaya
Hagaag Smith wuxuu sii wadaa inuu yiraahdo sheekadii hore waxay sharraxaysaa khadka uu jecel yahay laga soo bilaabo 2006 -dii. Waa maxay khadka? Qaybta uu u sheego filimkiisa/wiilkiisa nolosha dhabta ah Ha u oggolaan qof inuu kuu sheego inaadan wax samayn karin. Xitaa aniga Dadku waxba ma samayn karaan, waxay rabaan inay kuu sheegaan inaadan samayn karin. Haddii aad rabto inaad wax hesho, hel.
Dhammaan nuqulkan waxaa loogu talagalay oo keliya in wax la dejiyo. Waxaad daawan kartaa goos gooska oo buuxa (er) ee hoose, iyo googoynta Smith ee kore.
keega cad ee aasaasiga ah ee xoqan
kareemka jiiska ee keega arooska
sida loo sameeyo cake fondant guriga
imisa carruur ah ayuu leeyahay lauren london